IGeoConverter idityaniswe kwiCONDOR -Geofumadas
I-GeoConverter idibaniswe kwi-CONDOR
Ngo-Okthobha, 2012 Geospatial - GIS, ezintsha
I-GeoConverter, i-converter yedata yeGeobide, ivumela ukuba wenze lula ukuguqulwa kwedatha. Inkqubo yokusebenza eqhelekileyo yale sicelo isebenza ngokulandelelana, ifayile nganye yokufakwayo iguqulwa kwaye ayilandelanga okulandelayo kude kube lo msebenzi ngamnye uphela.
Le ndlela yokusebenza iyakwenza wonke umsebenzi (Imisebenzi ngamnye) kwaye ixesha elipheleleyo le nkqubo liya kuba lilingana nenani lwedata eliguqulwe kunye namandla omatshini owodwa owenzayo.
I-CONDOR isofthiwe ekhululekile evumela umsebenzisi ukuba achaze isethi yoomatshini ukwenza imisebenzi ngendlela edibeneyo kunye ehambelanayo. Umsebenzisi kunye nokusetyenziswa kwayo ulawula ukukhawuleza ukukhawuleza kwenkqubo yokusebenzisa ngokupheleleyo izixhobo ze-hardware zentlangano yakhe.
Ngalo njongo, GeoConverter longeza umsebenzi omtsha ukwenzela ukuba ludibaniswe kwi-CONDOR, ukuvumela ukuba kuveliswe ifayile ekhethekileyo yoqwalaselo engayi kuqhutyelwa kule ndawo kunye nomyalelo 'condor_submit'.
Xa umsebenzisi ezithumela lo msebenzi kwi-CONDOR, uya kusasaza phakathi kwipropati yomshini ebhalisiweyo ngokwemandla kunye nokungazinzi. Ngelo xesha, ukuqhuba inkqubo yokuguqulwa, onke amandla atholakalayo kwimibutho yakho isetyenziswa ngokufanelekileyo.
Ifayile yokucwangcisa ichazwe ngasentla iqulethe yonke imisebenzi efunekayo ukwenza ukuguqulwa komsebenzisi echazwe ngendlela eqhelekileyo kunye nesicelo kwaye idalwe kwindlela entsha yokukhetha imenyu "Izixhobo" zeGoConverter.
Nge-GeoConverter, kunye ne-CONDOR, singenza umzekelo ukuguqulwa kwamaphupha amakhulu ngokukhawuleza kwindlela yokuba ixesha elipheleleyo liza kuncitshiswa kwinani lamashishini athobileyo. Cinga ngenguqu yemihla yeefayili, ukuphindaphinda kwamanye amafomathi,
Eminye inomdla kwintlangano ukuba ibe noomatshini abangabonakaliyo kwiishedyuli "zobusuku".
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukunyanzelisa, ukuchithwa kwexabiso eliphantsi kwe-GPS sentimitha
Post Next I-Plex.Earth I-3.0 Iinkonzo zeWMS kwi-AutoCADOkulandelayo »